Ny Maha-Porto Rikàna Hoan’ilay Gadra Politika Oscar López Rivera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2014 17:44 GMT
Amin'ny fotoana maha-maro ny Porto Rikàna monina ivelan'ny nosy, nanjary nipetraka ny fanontaniana mikasika izany hoe maha-Porto Rikàna izany. Miresaka momba izany indrindra ny taratasy nosoratan'ilay gadra politika Portorikana Oscar López.
Ao anatin'izany, manome ny heviny izy
Sary tao amin'ny pejy Facebook, avotsory i Oscar López Rivera.
Ny maha-Porto Rikàna. Voalohany amin'ny sehatra vaovao natsangana ao amin'ny gazetiboky antserasera La Respuesta ity taratasy ity, natokana hanoratan'i Oscar López Rivera sy hitantarany ny momba azy. Ity ny sombiny amin'izany:
Ny dikan'ny maha- Porto Rikana amiko dia fanatontosana tsara ny andraikitra rehetra takian'ny mahaolom-pirenena antsika. Ny dikan'izany dia hoe mitolona hihazona ny kolontsaintsika, ny tenintsika, ny tantarantsika, ny hevitra mampiavaka antsika, ny mozikantsika, ny dihintsika, ny fahaizantsika mahandro, sy ny fototra mbola velona, ary hanaisotra amin'ny fanjanahantany ny saintsika sy ny tanindrazantsika. Midika izany fa tokony hitolona hiaro sy hitahiry izay rehetra mamaritra ny firenena Porto Rikàna isika.
Tsy mitovy dika amin'ny mari-panondroana maha-Porto Rikàna ny mari-panondroana maha-am-pielezana (diaspora). Tsy New-Yorkey aho. Nonina tao amin'ity firenena ity nandritra ny dimampolo taona sy tapany aho. Mahay ireo teny roa aho, saingy mijanona ho tenin-dreniko ny teny Espaniola. Tamin'ny fiafaran'ny taompolo 1960, nisy Porto Rikàna azo isaina amin'ny ratsa-tanana niara-nanangana gazety antsoina hoe “the Rican”. Nihevitra aho fa fahadisoana ilay anarana. Tsy naharitra akory ity gazety ity satria Rikàna vitsivitsy monja no mamaky azy sy fantatra ao anatin'izany. Mampiasa teny Spanglish (Espaniola-Anglisy) tahaka ireo Porto Rikàna am-pielezana maro aho. Ankafiziko ny tononkalon'i Pedro Pietri sy ny tantara tsangana nosoratan'i Miguel Piñero. Mino aho fa Boricuas am-pielezana maro no afaka manondro ny tenany amin'ny Spanglish, ary afa-manantena isika fa hitohy hiova sy hivoatra izany.
Nogadraina tao Etazonia nandritra ny telo-polo taona mahery i Oscar López Rivera noho ny foto-keviny ara-politika. Nogadraina nandritra ny 33 taona tao Etazonia i López Rivera, 71 taona, izay voaheloka ho “nanao teti-dratsy hikomiana” sy “teti-dratsy handosirana” izay nahazoany sazy an-tranomaizina 70 taona. Mpitolona hoan'ny fahaleovantenan'i Poerto Rikà, zanatanin'i Etazonia, izy. Mpanao politika, mpanakanto sy olona marobe manana fotokevitra samihafa no niara-nientana hitaky amin'ny filohan'i Etazonia Barack Obama mba hanome famelan-keloka an'i López Rivera, izay nantsoina ho gadra politika nigadra ela indrindra tao amin'ny ilam-bolantany andrefana.
Raha te-hahafantatra be kokoa, vakio azafady ny fitantarana nataonay teo aloha eto, eto, eto, ary eto.